Gudiga Shaqaalaha Rayidka KGS oo Kala Cararaya
Guddiga Shaqaalaha Rayidka qaar kamid ah ayaa shaqada ka cararay markii uu culeys shaqo kaga yimid Madaxweynaha KGS oo si toos ah u soo farageliyay Shaqaalaysiinta Shaqaalaha Rayidka oo loogu talagalay in si daahfurnaan ah loo qaado imtixaanada.
Madaxweynaha wuxuu musuqmaasuqay agaasimayaashii guud ee dhowaan la qaatay. ,Agaasimaha Shaqaalaysiinta ee Guddiga Shaqaalaha Rayidka ayaa ka carartay una wareegatay Wasaaradda Aminiga halka Agaasimaha Waaxda Policyga uu qarka u saran inuu isagana u wareego Wasaaradda Arimaha Gudaha .
Kadib markii lagu amray inay u shaqaalaysiyaan Mustaf Furulaato oo haatan ah Xogahayaha Shariifka qaraabo dhowna yihiin iyo mohamed Shariif oo Laba boos oo loo soo dhajiyay Wasaaradda Madaxtooyada oo kala ah Agaasimaha Maamulka iyo Lacagta iyo Madaxa Maamulka Lacagta.
Shariifka ayaa wuxuu u qoondeeyay labadiisa wiil Furulaato iyo Maxamed Shariif. Imtixaan aan la qaadin oo dadkiisa diyaarsan taasina waa ceeb iyo faragalin qaawan shariifka uu ku haayo laamaha kala duwan ee maamulka KGS gaar ahaan gudigii shaqaalaha rayidka ayadoo madaxda gudigaasi shaqaalaha rayidkana qofkasta cabsi uu ka qabo hadii warbixin aduunka uu u gudbiyo in la basaasayo oo shaqada laga erinayo.
waxaanu soo wadnaa dhowaan warbixino kaloo muhiimah oo ku saabsan agaasimiyaasha wasaaradaka KGS oo ayana loo hanjabay, qofka u hanjabey, waxa loogu hanjabayo, iyo sida ayagu hada u dhaqmaan qaarkood
Gudiga Doorashada K/ Galbeed oo soo saaray hab-raaca doorashada!